Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseMexico zokuPhula » INkanyamba uOlaf ibeka iliso layo eMexico
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseMexico zokuPhula • iindaba • Resorts • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
INkanyamba uOlaf efika-ngomfanekiso ngoncedo lweThe Weather Channel
Inkanyamba u-Olaf izisa imimoya yayo enamandla kunye nemvula enkulu kwi-peninsula yase-Baja California eMexico ngokuhlwanje apho iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zininzi kule ndawo.
Ngokutsho kweZiko leSiphepho leLizwe lase-US, imimoya yenkanyamba yomoya oziikhilomitha ezili-105 ngeyure kunye nemvula enethayo ukuya kwii-intshi ezili-15 inokuhlala ubusuku bonke.
Inkanyamba u-Olaf kulindeleke ukuba iqhubele emantla-ntshona ntshona kwaye ingomeleza ngaphambi kokuba iwele elunxwemeni.
Izibuko livaliwe okwethutyana kwaye iindawo zokuhlala zivuliwe. Amashishini akhwele ngeefestile njengoko abantu belinde emgceni bethenga ukutya kunye nezinto kwiivenkile ezinkulu.
Ke ukuba i-COVID-19 yenze into entle mhlawumbi, ibangele uninzi lweendawo ekuchithelwa kuzo iiholide ukuba zibe namandla angaphantsi kwama-40% kumgangatho weendwendwe kwindawo eya kuzo, eziya kuhlala kwindawo yazo.
Ngokwe-National National Hurricane Centre yase-US, imimoya yenkanyamba yomoya oziikhilomitha ezili-105 ngeyure kunye nemvula enethayo ukuya kuthi ga kwii-intshi ezili-15 inokuhlala ubusuku bonke enokubangela izikhukula kunye nodaka.
UMongameli weLos Cabos Hotels Association, u-Lilzi Orci, uxele ukuba iinqwelomoya ze-37 zasekhaya nakwamanye amazwe ziye zarhoxiswa, kwaye uqikelele ukuba ngabakhenkethi bamanye amazwe abangama-20,000 XNUMX abakule ndawo.
Njengokuba ubusuku buqhubeka, iNkanyamba u-Olaf kulindeleke ukuba ibhekise emantla-ntshona-ntshona kwaye ingomeleza ngaphambi kokuba ihlasele unxweme.
Ngokutsho Iziko leZiko leSizweUOlaf uqikelelwa ukuba uza kusondela kufutshane okanye ngaphezulu kwenxalenye esezantsi yeBaja California Sur ngokuhlwanje nangoLwesihlanu. Iimeko zenkanyamba ziqalile ngaphakathi kwenxalenye esemazantsi yendawo yokulumkisa inkanyamba ngokuhlwanje kwaye izosasazeka ngasentla ukuya ngoLwesihlanu.
Imvula ezinkulu ezinxulunyaniswa ne-Olaf kulindeleke kuzo zonke iindawo ezisemazantsi eBaja California Sur ukuya ngolwesiHlanu. Oku kuya kuba sisisongelo sezikhukula ezikhulu nezisongela ubomi kunye nodaka.
“Uqhwithela lwase-Olaf ngokuqinisekileyo luyaqina, amaza abetha kufutshane neMontageLosCabos. U-Olaf udumbile kwaye uvuthuzwa yimimoya. ”
Ukuhlaziywa kwangoku kwi-website ye-arhente yaseburhulumenteni ye-Oceanic and Atmospheric Administration ithi:
Imifanekiso evela kwiradar yaseMexico eCabo San Lucas, kunye nomfanekiso wesathelayithi, ibonisa ukuba iliso lika-Olaf liza kuwela kufutshane naseSan Jose del Cabo, kwaye iimeko zesaqhwithi kumazantsi e-eyewalls sele zisasazekile elunxwemeni.
Amagqabantshintshi amafu e-eyewall apholile kwezi yure zimbalwa zidlulileyo, kwaye uqikelelo lwamandla okuqina kwe-CIMSS ye-ADT yenyukile yaya kwi-90 kt. Ngokusekwe koku kunye nokonyuka kombutho we-eyewall kwimifanekiso ye-Cabo radar, amandla okuqala andisiwe ukuya kwi-85 kt.
"… Malunga no-7: 40 emva kwemini eSan Jose del Cabo, xa yayiqala ukukrazuka, kodwa phambi kokuphuma kombane."
Isindululo sokuqala ngama-325/10. U-Olaf kufuneka aqhubeke nokuhamba emantla ntshona uye emantla-ntshona kwiiyure ezingama-12-24, iziko lihamba kufutshane okanye ngaphezulu kwenxalenye esemazantsi peninsula yaseBaja California ngeli xesha. Emva koko, inqanaba eliphakathi kwinqanaba eliya ngasentshona ukusuka emazantsi-ntshona e-United States kufuneka lenze u-Olaf ajike ngasentshona, kwaye oku kufanele kulandelwe sisindululo esisemazantsi-ntshona njengoko inkanyamba ebuthathaka ilawulwa kukuhamba okuphantsi kumantla mpuma.
Isalathiso soqikelelo sitshintshile kancinane ukusukela kwiingcebiso zangaphambili, kwaye umkhondo omtsha uqikelelo nje oluncinci kuqikelelo lwangaphambili.
Ukuncipha ngokuthe ngcembe kulindelwe ngeeyure ezingama-24 zokuqala njengoko u-Olaf enxibelelana nosiba waseBaja California. Xa inkanyamba ijikela ngasentshona emva kweeyure ezingama-24, kufuneka ihambe ngaphezulu kwamanzi abandayo kwaye iye kumoya womoya owomileyo. Olu dibana kufuneka lubangele ukubola, kunye nenkqubo ibe yindawo ephantsi emva kwetropiki ngeeyure ezingama-60 kunye nentsalela ephantsi ngeeyure ezingama-72. Uqikelelo olutsha olunamandla luneenguqu ezincinci ezivela kuqikelelo lwangaphambili, kwaye lulele embindini wemvulophu yesikhokelo.
IMexico ibinengxaki yayo mva nje. Kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo, a Inyikima ye-7.1 yabetha i-Acapulco.